SAMOTALIS: MAYOR YUUSUF WARSAME SICIID HORMOOD KA BAXAY SOOMALILAND
Waxaan weydiiyey sida uu saaxiibadiisa u kala saaro. Waxuu igu yidhi isagoo qoslaya..”Qadyadda Soomaliland ciddii aan ka hor imanayn waan la saaxiibaa”.. Waxay taasi I xusuusisay kaalinta uu ku lahaa halgankii SNM..isagoo abaabulkii iyo ururiintii uu si gaar ah ugu suntan yahay inuu yahay ninka sameeyey astaanta amba loogada SNM..
Waxaan ku farxay kolkaan maqlay inuu isu sharaxay mayornimo. Dad badan ayaa is weydiiyey maxuu Yuusuf aqoontiisa sare iyo khibradiisa ula tartamayaa dhalin aan midna haysan. Yuusuf waxuu ku jawaabay hadal ninkii maqlayba ka marag furay dal jaceylkiisa iyo hammigiisa ku salaysan wax qabad iyo badbaadin ummadeed. Waxuu yidhi…”Waxaan rabaa inaan aqoonteyda ku dhiso magaalo casri ah iyo gole lagu xusuusto wax-qabad iyo horumar. Waxaan rabaa in doorashda tan xigta ay Golaha ku tartamaan rag iyo dumar aqoon iyo miisaan dhan walba leh, oo laga guuro suáasha igu badatay ee ah maxaad hoos isagu dhigeysaa. Waxaan rabaa in la yidhaahdo waar hebel maxaad isu sharaxi weyday adaa xilkaas ku habboone ….oo aqooni taliso…”
Dhinaca Shaqada waxuu ka hawlgalay Xamar oo uu hormood ka ahaa dhismayaashii kacaanka, waxuu sidoo kale ka hawlgalay Jabuuti iyo Hargeysa oo lagu xusuusto jidadka iyo daa’irooyinka (Roundabouts) Jabuuti, dhismaha barlamanka iyo nashqadeynta madaxtooyada. Waxaan la iloobi Karin tobananka sano ee uu ka soo shaqeeyey Dawladda Hoose ee Oslo, caasimadda Norway, dal uu haystay jinsiyaddiisa. Waxuuna ka mid ahaa ururo cilmiyeed iyo qaar mihnadeed ooy ka mid yihiin: